Gibts buufata baaburaa lafa jalaa Afrikaaf jalqabaa ta’e eebbisiifte – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Onkololeessa 10, 2012 (FBC) – Gibts buufata baaburaa lafa jalaa Afrikaa fi giddu galeessa Baha Afrikaatti isa jalqabaa ta’e eebbisiifte.
Projektichi damee geejjiba baaburaa ammayyeessuuf biyyattiin karoora qabatte keessaa qaama tokkodha jedhame.
Guyyaa kaleessaa ifatti kan eebbifame buufanni baaburaa lafa jalaa kun lafa kaaree meetra kuma 10 kan uwwiseedha.
Buufatichi Sadarkaa idila addunyaa kan eeggate yoo ta’u, doolarri Ameerikaa miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 16.8 baasii kan itti ta’ee fi dhiphina tiraafikii biyyattifi furmaata ta’a jedhamee abdatama.
Buufanni kun sadarkaa sadi kan qabu yoo ta’u, dheerina meetra 225, ballina meetra 22 fi gadi fageenya meetra 28 akka qabu yoo eerramu, balbaloota galuumsaa fi bahumsaa 8, iskaaleteroota 17 fi liiftoota 4 qabaachuu himameera.
Maddi:- CGTN Afrikaa
Dhuma torbee kanaa roobni cimaan roobuu danda’a jedhame
Abbaan Alangaa waliigalaa Keeniyaa duraanii Amoos Waaqoo Ameerikaa akka hin galle…
Ameerikaan hoogganaa oolanaa Alshabaab ajjeefte
Chaayinaan Ameerikaa dhimmaa gidduugaluu Hoong Koong akka dhabduu akeekachiifte